Home Wararka Al Shabaab oo sheegtay in ay weeraro toos ah ku bilowday Muqdisho
Al Shabaab oo sheegtay in ay weeraro toos ah ku bilowday Muqdisho
Guddoomiyaha Al-shabaab u qaabilsan Gobolka Banaadir oo lagu magacaabo Muuse Cabdi Carraale ayaa sheegay in Al-shabaab bilowday weeraro toos ah oo lagu qaadayo degmooyinka kala duwan ee magaalada Muqdisho.
Muuse Carraale oo codkiisa laga sii daayay warbaahinta taageerta Al-shabaab ayaa tilmaamay in weerarkii habeen ka hor lagu qaaday degmooyin ka tirsan Muqdisho ay hub iyo saanad badan kaga furteen Ciidamada dowladda.
Wuxuu sheegay in aysan Al-shabaab hub iyo saanad soo iibsan balse ay ciidamada dowladda Federaalka ka furtaan hubka iyo saanadda loo keeno haddana ay dib ugu weeraraan Muqdisho.
Carraale ayaa ku hanjabay in ay maalmaha soo socda Muqdisho ku qaadi doonaan weerarro toosa oo ka dhan ah ciidamada dowladda. Waxaa xusid mudan in Al-shabaab Muqdisho laga saaray 11 sano ka hor oo ku beegan 6-dii bishii Agoosto sannadkii 2011.
Previous articleTaliyahii Ciidanka Saldhiga Booliiska Baledweyne oo lagu dhex dilay gudaha Saldhiga Baledweyne
Next articleShacabka Muqdisho oo loo diiday inay maraan qaar kamida waddooyinka Magaalada Muqdisho
Shacabka Muqdisho oo diiday dibadbaxyo ay Villa Somalia diyaarisay
Maraykanka oo qirtay in ay dileen Soomaali & Farmaajo oo ka...